Smartphone News – AsiaApps
January 25, 2019 minn2unApp News / Smartphone NewsNo Comment on Anubis ဆိုတဲ့ Trojan Virus ကို Google Play Store မှာ ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့
အဆိုပါ Trojan Virus ဟာ Google Play Store ကနေ BatterySaverMobi ဆိုတဲ့ app နဲ့ Currency Converter App ကို ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ခဲ့သူတွေကို ကူးစက်ခဲ့တာပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးနီးပါး…
January 22, 2019 MoonSmartphone NewsNo Comment on ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ Storage ဘယ်လောက်ထိကျန်သေးလဲ ပြသပေးနိုင်တဲ့ Google Play Store ရဲ့ feature အသစ်
ခုတစ်ခေါက်မှာတော့ Android ဖုန်းတိုင်းလိုလိုမှာရှိတဲ့ Google Play Store မှာပါလာတဲ့ feature အသစ်လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က Android အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီ feature လေးအကြောင်းကို သေချာပေါက် ဖတ်ကြည့်သွားသင့်ပါတယ်နော်။…
January 14, 2019 January 15, 2019 minn2unSmartphone NewsNo Comment on Apple ဟာ တကယ်ပဲ သင်ခန်းစာ မရသေးတာလား….
Apple ဟာ နောက်ထပ် ၂၀၁၈ ကလိုမျိုး အမှားကို ပြန်လုပ်မိနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ မှာ လုပ်မိခဲ့တဲ့ အမှားဟာ သူ့ရဲ့စတော့ဈေးကို ထိုးကျစေခဲ့ပါပြီ။ Apple ဟာ ၂၀၁၉ ထဲမှာ နောက်ထပ် မော်ဒယ် အသစ်သုံးခုကို…
January 14, 2019 MoonSmartphone NewsNo Comment on ကယ်လိုရီတွက်ပေးတဲ့ HiVision နည်းစနစ် ပါဝင်လာမယ့် Huawei Mate20
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ခုနောက်ပိုင်း ရေပန်းစား နာမည်ကြီးနေတဲ့ Hwawei Mate 20 ရဲ့ Hiversion အကြောင်းလေးကို မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hivision ဟာဆိုရင် AI နည်းပညာနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ feature ဖြစ်တာကြောင့် သူလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရာတွေ…
January 11, 2019 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Redmi brand အတွက် Logo ကိုချပြပေးလိုက်တဲ့ Xiaomi
ကုမ္ပဏီရဲ့ strategy အသစ်လို့ပဲဆိုရမလား…. Xiaomi ဟာသူ့ရဲ့ sub-brand ဖြစ်တဲ့ Redmi အတွက် Logo ကိုပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နေ့က official ချပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Lei…
January 11, 2019 MoonSmartphone NewsNo Comment on အရင်က စမတ်ဖုန်းတွေထဲ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေ ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ Vivo
မကြာသေးမီက ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအရ Vivo က အထူးအဆန်းတစ်ခုကို ဖန်တီးတော့မယ့်သတင်းဟာ သေချာသလောက်ရှိနေပါပြီ။ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ “The Waterdrop” ဆိုတဲ့ codename တစ်ခုကို တွေ့ရပြီး အဲ့ဒီနာမည်က အရင်က စမတ်ဖုန်းတွေမှာ တစ်ခါမှာ မတွေ့ဖူးသေးတဲ့…
ခေါက်/ ဖြန့်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Galaxy Fold ရဲ့ဒီဇိုင်းအနေအထားကို Samsung မှအတည်ပြု
January 10, 2019 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ခေါက်/ ဖြန့်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Galaxy Fold ရဲ့ဒီဇိုင်းအနေအထားကို Samsung မှအတည်ပြု
ခေါက်နိုင်/ ဖြန့်နိုင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Samsung ရဲ့ Foldable စမတ်ဖုန်း Galaxy Fold ကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ CES 2019 မှာချပြမိတ်ဆက်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် ထင်ထားသလိုဖြစ်မလာပဲ CES 2019 မှာ တရုတ်အခြေစိုက်…
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးကွေးညွတ်စမတ်ဖုန်းအဖြစ်အသက်ဝင်လာခဲ့တဲ့ Flexpai Smartphone
January 10, 2019 January 10, 2019 minn2unSmartphone NewsNo Comment on ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးကွေးညွတ်စမတ်ဖုန်းအဖြစ်အသက်ဝင်လာခဲ့တဲ့ Flexpai Smartphone
ကွေးညွတ်စမတ်ဖုန်းတွေဟာ လူတွေပါးစပ်ဖျားမှာ ပြောနေခဲ့ကြတာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ခုနောက်ဆုံးတော့ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ တရုတ်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Royole ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က Las Vegas မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ CES ပွဲမှာ ပွဲဦးထွက်ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းလား…
Foldable (ခေါက်/ ချိုး) iPhone တွေပြုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ Apple!
January 7, 2019 MoonSmartphone NewsNo Comment on Foldable (ခေါက်/ ချိုး) iPhone တွေပြုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ Apple!
မိုဘိုင်လ်း ဖုန်းလောကမှာ Foldable (ခေါက်/ ချိုး) ဖုန်းဒီဇိုင်းတွေက လာမယ့် ၂၀၁၉ မှာရေပန်းစားလာမယ့် ပုံစံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း foldable ဖုန်းတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ Apple နဲ့ Samsung တို့ အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာကြဦးမယ့်ပုံပါပဲ။…
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ Huawei မာကတ်အခြေအနေ
December 27, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ Huawei မာကတ်အခြေအနေ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့ တရုတ်ကြီး Huawei ဟာလက်ရှိမှာ China, Africa, Europe အစရှိတဲ့စျေးကွက်တွေမှာပဲ ၂၀၁၈ အတွင်းမှာ စမတ်ဖုန်းအလုံးရေ ၂၀၀ မီလီယံကျော်ကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကထက် Sales percentage 30% ကျော်အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးကတော့…